SoundCloud, adduunka hoggaaminaysa adeegyada music-hosting, waxaa loogu tala galay kasta lover music boosteejo ah oo weyn. Waxba ma waxaad tahay abuure music ah ama kuwa ku raaxaysan raadinta iyo dhagaysiga muusigga kala duwan, waxaad ka heli kartaa adiga oo farxad halkan. Waxaa dhibaato ka mid ah oo keliya, si kastaba ha ahaatee, ma dhan oo gogo 'oo music barta this site download. Inkastoo qaar ka mid ah heesaha ugu download ogolaansho ah uploader ah, waxaa wanaagsan in ay leeyihiin qalab weyn oo si aad u hesho qiyaastii dhibaatadan. Looma baahna in la raadiyo wax kasta oo dheeraad ah, halkan waa waxa aad need.The TunesGo iyo Streaming taariikhqorihii Audio soo bixi kartaa wax songs SoundCloud la eber tayada khasaaro. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay ku siinaysaa awood u leeyahay inuu abuuro ringtones iyo edit macluumaad song. Bal aynu eegno sida loo isticmaalo hoos ku qoran.
Xalka 1: Isticmaalka TunesGo
Xalka 2: Isticmaalka Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio
1 Download heeso ka SoundCloud
Download barnaamijkan iyo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Markaas abuurtaan barnaamijka dib markii la rakibey. Waxaa jira laba nooc oo waa in aad doorato mid ka saxda ah ee aad PC ama Mac. Tan iyo markii labadan versions shaqeeyo isku mid, kaliya waxaan qaadi doonaa version daaqadaha sida tusaale.
U fiirso weyn Record button dusheeda ka hadhay suuqa kala hoose? Riix badhanka si ay u helaan diyaar. Markaa waa inaad aadaa soundcloud.com in qulquli music aad ugu jeceshahay. Sida ugu dhakhsaha badan, waxaa sanqadhaya soo socda ka your computer, barnaamijkan bilaabi doonaan in ay soo bixi heesaha.
Fiiro Gaar ah: Waxa muhiim ah in aad hesho dhamaystiran songs waa in xidhiidh ah oo internet wanaagsan iyo in la hubiyo ma jirto il dhawaaq kale on your computer.
2 Bedelka music SoundCloud in ay Lugood
Dooro music ka soo bixi Maktabadda iyo riix dar Lugood in badhanka hoose. Markaas music ah waxaa loo wareejin doonaa Lugood iyo playlist SAR loo maamuli.
Fiiro gaar ah: Waxaad xaq u riixi kartaa item heesta dooro Show in Folder in ay helaan song ee folder maxalliga ah.
Samee ringtones: guji giraan icon dhexe ee item song iyo bitmap ah ka muuqan doontaa hooseysa. Dooro mid ka mid qayb ka mid ah bitmap iyo badbaadin u noqon MP3 ama file M4R in lagu shubaa telefoonada aad. M4R waxaa loogu talagalay iPhone iyo MP3 wixii telefoonada kale.
Edit macluumaad song: barnaamijkan si toos ah ka heli kartaa macluumaad oo dhan songs soo bixi, laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad xaalkaa macluumaadka keligaa. Midig u guji song iyo dooran Detail View in menu keentay. Markaas buuxi duurka tafatirka macluumaad kasta oo aad jeceshahay in aad ka.
Waxay u egtahay weyn, soo maaha? Waa in aad kala soo bixi barnaamijkan u leedahay in isku day ah oo ay hesho jecel muusiga oo dhan SoundCloud in aad jeebka.
> Resource > Music > Sidee Waxaad ka SoundCloud Download karaa Music Si fudud